ग्रिन कफीको नाममा ठगी गर्ने रसियन नागरिकले डेढ वर्षदेखि बिटक्‍वाइन माइनिङ गरेको पुष्टि, मुद्दा नचल्ने भन्दै फाइल फिर्ता
नारायण अधिकारी शुक्रबार, वैशाख ३, २०७८, २०:२१
काठमाडौं- ग्रिन कफीको नाममा ठगी गर्दै आएका रसियन नागरिक इगोर कुट्सले नेपालमा अवैध रहेको बिटक्‍वाइन पनि माइनिङ गर्ने गरेको पुष्टि भएको छ।
२५ थान ल्यापटपसहित विभिन्‍न उपकरण बरामद भएपछि बिटक्‍वाइन माइनिङ गरेको हुनसक्ने भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ठगीसँगै बिटक्‍वाइनको पनि अनुसन्धान गरेको थियो। बरामद ल्यापटपसँगै अन्य उपकरणहरु प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। विधि विज्ञानले बिटक्‍वाइन माइनिङ भएको रिपोर्ट दिएको सीआईबीका निर्देशक तथा डीआइजी सहकुलबहादुर थापाले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
‘विधि विज्ञानले बिटक्‍वाइन माइनिङ तथा कारोबार भएको भनेर रिपोर्ट दिएको छ,’ डीआइजी थापाले भने, ‘रिपोर्टअनुसार विगत डेढ वर्षदेखि अवैध बिटक्‍वाइन माइनिङ भएको देखिन्छ।’
बिटक्‍वाइन मानिङ गरेको रिपोर्ट विधि विज्ञानले दिएपछि सीआईबीले ठगीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम मुद्दा चलाउने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पेस गरेका थियो। यी दुवै ऐनले नेपालमा बिटक्‍वाइनलाई मुद्राको रुपमा कानुनी मान्यता दिएको छैन। जसकारण बिटक्‍वाइनसम्बन्धी कारोबार नेपालमा पूर्णरुपमा गैरकानुनी हुन्छ।
सोही प्रावधानलाई टेकेर सीआईबीले सरकारी वकिलसमक्ष फाइल बुझाएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले भने ठगीमा मात्रै मुद्दा दर्ता गर्ने भन्दै बिटक्‍वाइनको फाइल फिर्ता पठाएको सीआईबी स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो। ‘बिटक्‍वाइन कारोबार भएको पुष्टि भएपछि त्यसमा पनि मुद्दा चलाउन भन्दै सरकारी वकिलसमक्ष फाइल बुझाएका थियौं। तर, बिटक्‍वाइनको फाइल फिर्ता भएर आएको छ,’ सीआईबी उच्च स्रोतले भन्यो।
विधि विज्ञानले बिटक्‍वाइन कारोबार भएको भनेर पुष्टि हुँदा पनि फाइल फिर्ता गरिदिएपछि सीआईबीका अधिकारीहरु छक्क परेका छन्। ‘हामीले विधि विज्ञानले दिएको बिटक्‍वाइन कारोबारको रिपोर्टसहित फाइल पेस गरेका थियौं। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता गरेपछि भने अचम्ममा पर्‍यौं,’ सीआईबी स्रोत भन्छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले कति बिटक्‍वाइन कारोबार भयो, कहिलेदेखि सुरु भयोलगायत प्रस्ट नखुलेकाले फिर्ता गरिएको भन्दै पन्छिने काम गरेको छ। सीआईबीले भने सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता पठाएको फाइल पुन: पठाउने तयारी गरेको छ।
के हो बिटक्‍वाइन?
ओपन सोर्स सफ्टवेयरको रुपमा जापानी नागरिक सातोसी नाकामोतोले सन् २००९ मा बिटक्‍वाइनको प्रयोग सुरु गरेका थिए। सन् २००९ मा १० सेन्टबाट यो सुरु भएको थियो। यो विश्वव्यापी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली हो।
विश्वमा अहिले ११ सयभन्दा बढी 'क्रिप्टोकरेन्सी' प्रचलनमा रहेका छन्। यसको कारोबारमा कुनै बैंक वा मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्दैन र कारोबार गर्ने व्यक्तिहरुको पहिचान खुलाउन पनि जरुरी हुँदैन। यसको कारोबारमा कुनै सेवा शुल्क नलाग्‍ने, प्रयोगकर्ताको पहिचान नखुल्ने र करको दायराभित्र पनि नपर्ने देखिन्छ।
विश्वमा अहिले बिटक्‍वाइनमा लगानी बढिरहेको छ। बिटक्‍वाइन एक प्रकारको 'भर्चुअल' पैसा हो। यसको इलेक्ट्रोनिक कारोबारमात्रै गर्न मिल्छ। डलर, युरो, भारु वा नेपाली नोटजस्तो कागजीरुपमा छापिँदैन। तर, कम्युटर सफ्टवेयरमार्फत् विश्वभरका मान्छेले यसको कारोबार गर्न सक्छन्।
इन्टरनेटमार्फत् बिट सेवा लग अन गर्ने, युजर आइडी बनाउने, साथीभाइ खोज्‍ने, माइनिङ गर्ने, त्यसमा रहेको वालेटमा क्‍वाइन किनबेच गर्ने र कारोबार गर्ने गरिन्छ। बिटक्‍वाइन सेयरजस्तै गरी रकम बढ्ने हुन्छ। तर, यसमा कारोबार गर्ने व्यक्तिको पहिचान तथा रकमको स्रोत खुलाउनु पर्दैन।
चार जनाविरुद्धको ठगीको फाइल अदालतमा
बिटक्‍वाइनको फाइल फिर्ता भए पनि ग्रिन कफीको नाममा भएको ठगीसम्बन्धी फाइल भने सरकारी वकिल कार्यालयबाट जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगिसकेको छ। रसियन नागरिक ३० वर्षीय कुट्ससँगै पोखरा महानगरपालिका-१९ का ४२ वर्षीय आशिष आचार्य, मुधुसुदन पाण्डे र राजु महर्जनलाई विपक्षी बनाउँदै ठगीको मुद्दा दायर भएको थियो।
रसियन नागरिक कुट्सको योजनामा आचार्यको नाममा नयाँबजार खुशिबुमा टिम वान सप्लायर्स प्रालि कम्पनी खोलेर काम गरिएको थियो। पाण्डे र महर्जनले भने ग्रिन कफीको ग्राहक बनाउने र सामान सप्लाइ गर्दै आएका थिए।
उनीहरुले उक्त कफी सेवन गरेपछि बिनाव्यायाम, बिनाडाइटिङ, कुनै साइडइफेक्टबिना एक हप्तामै १३ किलोसम्म मोटोपन घटाउँछ भन्दै अनलाइनमार्फत् विज्ञापन गरेर ठगी गरेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा ग्रिन कफीको नाममा छ करोड रुपैयाँ ठगी भएको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी गंगा पन्तले बताइन्। ग्रिन कफीबाट ठगिएको भन्दै जाहेर दिनेको संख्या ६० पुगेको छ।
उनीहरुले ग्रिन कफी प्रतिकेजी ९६० रुपैयाँमा किनेर विभिन्‍न केमिकल हालेर प्रशोधित गरेपछि प्रतिकेजी २० हजार रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्दै ठगी गरेका थिए।
यसरी कमाएको रकम हुण्डीमार्फत् विदेश पुग्‍ने गरेको निष्कर्ष सीआईबीले निकालेको छ। यही शैली अपनाएर भारत र रसियामासमेत ठगी हुने गरेकोले यसको मुख्य योजनाकार रसियन नागरिक रहेको सीआईबीले जनाएको छ। प्रहरीले उक्त कम्पनीमा छापा मारेर ६४४ किलो हरियो कफी, बिक्री गर्ने तयारीमा राखेको १०० ग्रामको हरियो कफी दुई हजार ८२२ प्याकेट, विभिन्‍न कच्चा पदार्थ बरामद गरेको थियो।
बिटक्वाइन मुद्दा : ४ कराेडभन्दा बढी बिगो मागदाबी, सुनुवाइ सरेकाे सर्‍यै
बिटक्वाइन धन्दामा राष्ट्र बैंककै सहयोगमा ई-सेवालाई उन्मुक्ति
बिटक्वाइन धन्दा : अभियुक्त हुनुपर्ने असगर कसरी भए सरकारी साक्षी?
कानुन मिच्दै यसरी हुन्थ्यो ई-सेवाबाट विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, राष्ट्र बैंक बन्यो रमिते
बिटक्वाइन धन्दा : राष्ट्र बैंकले लुकायो ई-सेवाको अनुसन्धान प्रतिवेदन
बिटक्वाइनमा मुछिएको ई-सेवामार्फत् 'बेटिङ' धन्दा, १३ प्रतिशत कमिसन बुझेर अवैध रकम ट्रान्सफर
ग्रिन कफीको नाममा त्रिदेशीय ठगीको जालो : एक हजारमा किनेर ४० हजारमा बिक्री
रोगसँगै भोकको चिन्ता : अब आमाले खाना खुवाउने यत्ति नै त होला!
नांगो अवस्थामा थिए बालकका शव, पीडितको प्रश्न- ढोका ‘लक’ भएको कारमा कसरी राखियो?
दाङ घटना : कारमा भेटिएका तीन बालकको शवको पहिचान खुल्यो, दुई जना पक्राउ
बलात्कार आरोपीलाई ८ वर्ष कैद, २ लाख जरिवाना अपाङ्गता भएकी महिलालाई बलात्कार गरेको कसुरमा संखुवासभा अदालतले एक युवकलाई आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ। बिहीबार, वैशाख २३, २०७८
यात्रुसँग बढी भाडा लिने काउण्टरका एक कर्मचारी पक्राउ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यात्रुसँग बढी भाडा लिने एक जनालाई गंगबु बसपार्कबाट पक्राउ गरेको छ । बुधबार, वैशाख २२, २०७८
बाजुरामा बालिकामाथि पेट्रोल छर्किएर आगो लगाइयो, दुई जना पक्राउ बाजुरामा दुई बालिकामाथि पेट्रोल छर्किएर आगो लगाइएको छ। आगो लगाएको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बाजुराको... बुधबार, वैशाख २२, २०७८
एमाले बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई भेटे बिहीबार, वैशाख २३, २०७८
राष्ट्रिय सभामा जित सुनिश्चित गर्न छलफल गर्ने एमाले निर्णय, उम्मेद्‌वारबारे छिट्टै निर्णय गरिने बिहीबार, वैशाख २३, २०७८
नागढुङ्गामा ‘स्वास्थ्य जाँच केन्द्र’ स्थापना बिहीबार, वैशाख २३, २०७८
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन अभाव, सिलिण्डर उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्रीको आग्रह बिहीबार, वैशाख २३, २०७८
एमाले स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा जारी बिहीबार, वैशाख २३, २०७८